Android 9.0 smartphone ine hombe yekutsvedza-kunze qwerty keyboard inogona kuzoitika munguva pfupi
Kuru Nhau & Ongororo Android 9.0 smartphone ine hombe yekutsvedza-kunze QWERTY keyboard inogona kuzoitika munguva pfupi
Nhasi & rsquo; s inotsvedza nhare zvirokwazvo vakasiyana nezvinodiwa zve2008 & rsquo; s Nokia N97 kana iyo Nokia E7 yakaburitswa makore mashoma gare gare, asi zvitende kana kwete, ivo vagadziri veaya maviri maindasitiri echinyakare vari kushanda mukugadzirisa echinyakare inotsvedza dhizaini kune yazvino nyowani mobile tech maitiro .
Chiziviso ichocho chaizvo akaita masvondo mashoma apfuura nekambani diki inonzi F (x) Tech, iyo yaimboenda neLivermorium, ichiedza kuita hope QWERTY keyboard Moto Mod zvakaitika kumashure muna 2018.
Ipo purojekiti iyi payakasiiwa kamwe chete Livermorium paakaona chishongedzo che smartphone & ldquo; yakasungirwa kune hofori senge Motorola wasn & rsquo; kuzadza mukaha isu isu taida kwazvo kuzadza & rdquo;, F (x) Tech yakagadzika panzira inodakadza zvakanyanya yekusimudzira nhare ine ikhibhodi yekisimusi kubva pasi kumusoro.
Yakadaro chigadzirwa, yakabhadharwa sefoni & ldquo; iwe waifunga kuti haugone & rdquo ;, parizvino yakarongerwa kutanga kweQ1 2019 , kuronga kumhanyisa stock stock ye Android 9.0 Pie kunze kwebhokisi, sekureva kwe yazvino email mushandirapamwe inoratidza yakaonekwa nevanhu vari uko XDA Vagadziri .
Zvinokatyamadza zvakakwana, iyo isina kutaurwa zita inotsvedza inouyawo neinotangisa yekudyira yakagadzirirwa zvakanakira mashandiro emamiriro ekunze, pamwe neemaimendi-ane hushamwari email uye khalenda maapplication akagadzirwa naF (x).
Pasi pemutsara, kambani inovimbisa kuburitsa & ldquo; mamwe maapplication ane yakatsaurwa nzvimbo yeUI & rdquo;, uku ichitsigira & ldquo; yakazvimirira, inotungamirwa nharaunda OSes kupfuura Android. & Rdquo; Funga Dzinza OS uye Sailfish OS , kunyangwe paine & rsquo; s isina nguva yenguva yechero izvo zvakadaro.
Kubva pamaonero ehurdware, iyo QWERTY smartphone yakamboratidzwa kumitambo 6-inch & ldquo; yazvino & rdquo; AMOLED kuratidza ine 2: 1 factor ratio, mashoma bezels, uye isina notch, pamwe ne & ldquo; rocking & rsquo; keyboard & rdquo; kuisa zvaunoda zve BlackBerry Priv , KEYone , uye CHINOKOSHA2 kunyadzisa.
Isu & rsquo; tiri kutaura hombe-mitsara kurongeka ine yakatsaurwa manhamba mutsara, chaiyo PC-senge modifier uye chiratidzo makiyi, backlighting mashandiro, uye inotonhorera yakadzvanywa kiyi dhizaini. Kana iri yekutsvedza nzira, F (x) Tech yakasarudza kuenda nenzira yakakomberedzwa yekuvandudza mamakona ekuona skrini, nepo ichivimbisa mamiriro e-e-iyo-kugadzikana nekusimba-kukurudzira dhizaini nerubatsiro rweambotaurwa timu yeinjiniya kuseri kweNokia N97 , E7, uye N950.
Nehurombo, hapana mazwi pamitengo, zviyero, kana zvimwe zvekufungidzira uye maficha, uye isu hatina & rsquo; hatina chaiyo chigadzirwa mufananidzo wekugovana newe. Izvo zvinoita kuti titange kunyatso kubvunza iyo Q1 2019 kuburitsa chinangwa, asi pamwe isu & rsquo; tichashamisika zvinofadza ... nguva ino kutenderera .
Kutsvaga Mutambo weZigaro mwaka 8 episode 2 kudonha? Hapana chikonzero, AT&T muridzi weHBO izvozvi
5 yakanyanya chiito mitambo senge Kudana Kwebasa kweApple uye iOS
Google Pixel: Kurume chekuchengetedza chigamba kunokanganisa waya isina waya
Vhura sei (uye ita zvine musoro) iyo LG V30 & apos; s Quad DAC
Nhare neFlappy Shiri yakaiswa izvozvi zvinhu zvepamusoro paBay
Tora peya mbiri yesony-yekudzima mahedhifoni pahafu yemutengo
Samsung zviri pamutemo inodonhedza iyo Galaxy J akateedzana, ndokuitsiva neGirazi A.
Makumi maviri emakesi akanakisa eiyo iPhone 7